Abantu baseCanada Bathenga Imikhiqizo Yezempilo Eminingi Ku-inthanethi - Clickfor.net | Ibhulogi Yezihambeli | Thumela ibhulogi yesivakashi
Ungasithola Kanjani Isikweletu Somuntu Siqu Ngesikweletu Esiphansi Nemali Engenayo Ephansi?
Amathiphu amahle okuthola imibono yokuqukethwe
Ngenani elikhulayo lezinketho ze-e-commerce ezitholakala kubantu baseCanada, abantu abaningi ngokwengeziwe bakhetha ukuthenga imikhiqizo yezempilo ku-inthanethi kunokuba bayithenge kulezi zinsuku. Lo mkhuba ungabalelwa ezicini ezahlukahlukene ezahlukahlukene - ukunethezeka, ikhono lokuqhathanisa izintengo, kanye nokungabi nayo inkinga yokungena endaweni ebonakalayo. Uma ufuna imibono yokuthunyelwe kwebhulogi mayelana nalesi sihloko, hlola lesi sihloko ukuze uthole ezinye izinsiza ezinhle zokumaketha ku-inthanethi! Abantu baseCanada manje sebethenga imikhiqizo eminingi yezempilo ku-inthanethi kunasezitolo zezitini nodaka. Lokhu kungenxa yokufaneleka okuphezulu kokuthenga ku-inthanethi, kanye nekhono lokuqhubeka nokucwaninga izinketho ezahlukene ngaphandle kokushiya ikhaya lakho.
Amathrendi Wezempilo waseCanada
Abantu baseCanada baya ngokuya bethenga imikhiqizo eminingi yezempilo ku-inthanethi. Abathengi abaku-inthanethi nabo banamathuba amaningi okuthi bathenge evikini lokuqala lenyanga futhi bathenge imikhiqizo enikezela ngomkhumbi wamahhala. Izinga labo lokunethezeka lokuthenga ngomxhumanisi liholele ekwenyukeni kwenani labathengi baseCanada abathenga imikhiqizo yabo yokunakekelwa kwezempilo ngokuqondile ezinkampanini ezithengekayo nezithenjwayo zaseCanada esikhundleni salokho. https://goldbuds.com/ yokuthembela kumthengisi oyedwa. Umbiko weStatistics Canada uveza ukuthi abantu baseCanada bathenga eminye imikhiqizo yezempilo ku-inthanethi. Lokhu kuwuphawu olukhuthazayo njengoba kungaholela ekwandeni kokufinyelela kanye nokufinyeleleka kokunakekelwa kwezempilo. Umbiko uphinde ukhombise ukwehla kwenani lemiyalelo egcwaliswa emakhemisi, okungabalelwa ezigulini ezi-oda ku-inthanethi esikhundleni salokho. Abathengi baseCanada nabo basebenzisa ama-smartphones abo kakhulu kunangaphambili ukuze bathenge kumawebhusayithi endawo.
Izizathu Abantu baseCanada Bathenga Kakhulu Ku-inthanethi
Izizathu zokuthi abantu baseCanada bathenge imikhiqizo eminingi yezempilo ku-inthanethi yingoba ibavumela ukuthi bathenge lapho bevumelana khona. Akumele futhi bashiye ukunethezeka kwekhaya labo futhi bangathola inani elishibhile ku-inthanethi. Lokhu kufakazelwe yiqiniso lokuthi ngo-2019, imikhiqizo yezempilo ebiza ama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.2 ifana https://goldbuds.com/product/rockstar-tuna-indica/ zathengwa ngamawebhusayithi aseCanada afana neGoldbuds kanye nabantu baseCanada bachitha cishe kathathu lelo nani kumawebhusayithi aseCanada ngo-2020. Abantu baseCanada bathenga imikhiqizo eminingi yezempilo ku-inthanethi kunangaphambili. Lokhu kungenxa yokwanda kokubili kwe-e-commerce kanye nengcebo yolwazi olutholakala ku-inthanethi. Lokhu kudala inselelo kubathengisi baseCanada ukuthi bahambisane nesidingo futhi banikeze abathengi inhlobonhlobo yezinketho.
Okufanele Ukwazi Ngaphambi Kokuthenga
Abantu baseCanada baya ngokuya bethenga imikhiqizo yezempilo ku-inthanethi. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi lena indlela ephephile yokuthenga, kodwa kunezingozi ezihilelekile. Uma ubheke ukuthenga isithasiselo noma imithi ku-inthanethi, kubalulekile ukwenza isiqiniseko sokuthi iwebhusayithi ihloniphekile futhi ihlolwe yinkampani yangaphandle ezimele. Ungaphinda ubheke lapho umkhiqizo wakhiwe khona ukuze uqinisekise ukuthi uphephile futhi awukhohlisi Ukuthenga ku-inthanethi ngezinye izikhathi kungaba ibhizinisi elikhohlisayo, elingenaso iziqinisekiso zokuthi umkhiqizo wakho uzofika futhi usebenze ngendlela obulindele ngayo. Abantu abaningi baseCanada bathenga imikhiqizo yezempilo ku-inthanethi nsuku zonke, kodwa badinga ukwazi ukuthi yini okufanele bayilindele ngaphambi kokufaka ama-oda abo. Uma ungathanda ukuthenga okuthile kuwebhu, ezinye izinto okufanele uzikhumbule zihlanganisa: ingabe intengo iyaqhudelana? ingabe umthengisi uthumela emazweni ngamazwe? Ingabe umthengisi unikeza iziqinisekiso ngomkhiqizo wakhe uma ungasebenzi nganoma yisiphi isizathu phakathi nezinsuku ezingu-30 zokuthenga?
Umjikelezo Wempilo Womkhiqizo
Umjikelezo wempilo womkhiqizo yinqubo yokudala, ukukhiqiza, noma ukumaketha umkhiqizo. Kunezigaba ezinhlanu emjikelezweni wokuphila womkhiqizo: umbono, ukuklama nobunjiniyela, ukukhiqiza, ukusatshalaliswa kanye nokumaketha. Njengoba imikhiqizo idlula kulezi zigaba iba yinkimbinkimbi futhi ibize kakhulu okwenza kube nzima ukuyikhiqiza. Lezi zinkinga zivame ukudala ukuthi izinkampani zishiye imikhiqizo esedlule ezigabeni ezintathu zokuqala zivuna imikhiqizo emisha. I-inthanethi iguqula indlela abantu baseCanada abathenga ngayo imikhiqizo yezempilo. Abathengi basebenzisa izimakethe eziku-inthanethi ukuze bathole abakudingayo, okwenza kube lula futhi kungabizi kakhulu kunokuya ekhemisi eliwuchungechunge. Ngaphezu kwalokho, abathengisi bemikhiqizo yezempilo badale amawebhusayithi enza ukuthenga kube lula ngokunikeza abathengi ulwazi oluningiliziwe mayelana nokuthi incwadi kadokotela izobiza malini ngaphambi kokuthenga.
Iseluleko Sama-Blogger Amasha
Ama-Blogger amasha emhlabeni wokubhuloga kudingeka aqiniseke ukuthi anikeza abafundi bawo ulwazi olufanele kakhulu. Akudingekile ukuba babe ngochwepheshe kuzo zonke izinto, kodwa kufanele babhekisise lokho abalaleli babo abakufunayo futhi babanikeze ngakho. Futhi, ama-blogger kufanele asebenzise izinsiza ezifana ne-Google Trends kanye nenkundla yezokuxhumana ukuze bathole ukuthi izithameli zabo zifunani. Lapho uqala ibhulogi, enye yezinto zokuqala okufanele uzicabangele ukuthi uyafuna yini ukuthengisa imikhiqizo yakho ku-inthanethi noma cha. Kunezinzuzo eziningi zokuthengisa ku-inthanethi, okuhlanganisa ukufinyelela okwengeziwe nokuthengiswa kwemikhiqizo yakho. Nokho, kubalulekile ukuthi ukwazi ukuhambisana nezicelo zesevisi yamakhasimende nama-oda nsuku zonke. Uma uzama ukwakha ibhulogi yakho noma iwebhusayithi, uzodinga ithrafikhi. Indlela engcono kakhulu yokwakha ithrafikhi ukunikeza okuqukethwe okufunwa abanye abantu. Ukuze wenze lokhu, kuwukuhlakanipha ukucwaninga nokuqonda izitayela zezempilo eCanada ukuze ubhale ngazo ngendlela efanele.
Abantu baseCanada bathenga imikhiqizo eminingi yezempilo ku-inthanethi kunangaphambili, futhi lo mkhuba uzoqhubeka. Ngenxa yokwanda kwemali engenayo etholakalayo eCanada, abantu abaningi baseCanada baphendukela kubathengisi abaku-inthanethi ukuze bathole izinketho ezinempilo nezithengekayo. Ngemuva kokwenza ucwaningo, ucwaningo luthole ukuthi abantu baseCanada bachitha imali eningi ku-inthanethi emikhiqizweni yezempilo. Ucwaningo luphinde lwathola ukuthi kuthatha imizuzu engaphansi kwemi-3 ukuthenga into ku-inthanethi; lokhu kungenxa yokuthi izinto eziningi seziyatholakala ukuze zilethwe ngosuku olufanayo. Abantu baseCanada baya ngokuya bephendukela ezitolo eziku-inthanethi ezifana ne-Amazon ne-Walmart ukuze bathenge imikhiqizo ehlobene nezempilo. Izinto ezake zathengwa endaweni kuphela, abathengi abaku-inthanethi manje sebengakwazi ukuthenga kalula, ngamanani aphansi, kanye nokuthunyelwa kwamahhala. Ngaphandle kokuthi ukuthenga ku-inthanethi kuyimakethe ekhulayo, kubalulekile ukuthi amabhizinisi aqaphele imithetho yendawo yawo. Uma ubheke ukunwebekela kwelinye izwe, kungcono uqale ngokufunda ngemithetho nemithethonqubo ekhona ukuze wenze uhlelo lwakho lwebhizinisi ngokufanele.